Impendulo Esheshayo: Ungakumisa Kanjani Ukuhwamuka Amanzi Ethangini Lezinhlanzi - BikeHike
Ikhaya » Okuxubile » Impendulo Esheshayo: Ungakumisa Kanjani Ukuhwamuka Kwamanzi Ethangini Lezinhlanzi
Ngiwamisa kanjani amanzi ami e-aquarium ukuthi ahwamuke?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi amanzi ahwamuke ethangini lezinhlanzi?
Uwamisa kanjani amanzi ethangi lezinhlanzi?
Kungani ithangi lami lezinhlanzi lihwamuka ngokushesha kangaka?
Kungani ithangi lami lezinhlanzi lilahlekelwa amanzi amaningi kangaka?
Ngingakwazi ukufaka amanzi ethangini lami lezinhlanzi?
Ngingakwazi ukwengeza isipholile samanzi ngenkathi izinhlanzi zisethangini?
Ingabe kufanele ngimboze ithangi lami lezinhlanzi ebusuku?
Kufanele libe ngakanani izinga lokushisa ithange lezinhlanzi?
Uwengeza kanjani amanzi ethangini lezinhlanzi ngemva kokulihlanza?
Izinga lamanzi kufanele libe phezulu kangakanani ethangini lezinhlanzi?
Kufanele ngishintshe kangaki amanzi ethangini lezinhlanzi?
Ngiligcina kanjani ithange lami lezinhlanzi linempilo?
Kufanele uqale nini ukushintsha amanzi?
Ungakwazi yini ukushintsha amanzi e-aquarium kaningi?
Ngazi kanjani uma ithangi lami lezinhlanzi lijabule?
Uwaphatha kanjani amanzi ethangini?
Uwaphatha kanjani amanzi ezinhlanzi?
Mabi kangakanani amanzi kampompi ezinhlanzi?
Kufanele uphakele kangaki izinhlanzi?
Kufanele ulinde isikhathi esingakanani ngaphambi kokwengeza izinhlanzi eziningi?
Ukugcina ithangi lezinhlanzi lipholile Gcina i-aquarium yakho ikude namafasitela anelanga futhi uyibeke endaweni epholile yegumbi. Thola isivalo sethangi ukuze ugcine ukuhwamuka kube kuncane. Uma usetha ithangi elisha, khetha elinendawo encane. Sebenzisa izibani ezishisisa kancane njengama-LED futhi ungashiyi amalambu ethangi akhanya ngaso sonke isikhathi.
I-Air Movement Ukuhwamuka kuncipha njengoba umswakama osemoyeni ngaphezu kwamanzi ukhula. Kungakho ukungeza isivalo sengilazi ethangini lakho kunciphisa izinga lokuhwamuka. Ungqimba lomhwamuko phakathi kwendawo yamanzi nesivalo sengilazi lwenza kube nzima ukuthi ukuhwamuka kwenzeke.
I-chlorine ezingeni lika-2ppm (izingxenye ngesigidi) cishe ngamalitha angu-10 amanzi izothatha amahora angu-110 ukuhwamuka ngokuphelele. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izimo ezithile ezifana nokukhanya kwe-ultraviolet, ukungena emoyeni, nokujikeleza ngendlela efanele kuzosheshisa inqubo yokuhwamuka.
Ukuhwamuka kwamanzi ethangi lezinhlanzi kuyinto evamile; Nokho, zikhona izindlela zokuyinciphisa. Ukushisa kuyimbangela eyinhloko yokuhwamuka kwamanzi, ngakho-ke ukushisa okuncane, kuba ngcono. Ukushisa okukhulu akugcini nje ngokwenza amanzi ahwamuke ngokushesha, kodwa futhi kubangela ukuthi umzimba wezinhlanzi zakho usheshe, wengeze ubuthi ethangini futhi ucindezela izinhlanzi.
Izinga lamanzi e-aquarium yakho lizoshintshashintsha. Izimo eziningi zokwehla kwamazinga amanzi ukuhwamuka, ngokuvamile okubangelwa amazinga okushisa aphezulu ezindaweni ezifudumele. Uma une-aquarium enesiqongo esivulekile cabanga ukusebenzisa ithreyi yokuhwamuka ehlobo ukuze unciphise ukulahleka kwamanzi.
Gcwalisa ibhakede elihlanzekile cishe izingxenye ezimbili kwezintathu kuya kwezintathu kwezine eligcwele amanzi. Thela kancane amanzi ebhakedeni epuletini elise-aquarium. Phinda izinyathelo eziyisithupha nesikhombisa kuze kube yilapho ithangi seligcwele amanzi. Engeza izitshalo nemihlobiso.
Ungakwazi ukwengeza amanzi okushisa emanzini anezinhlanzi kuwo uma ususa ingxenye encane yamanzi kuphela. Uma ushintsha amanzi ngokuphelele, udinga ukufaka isipholile emanzini ngaphambi kokufaka inhlanzi ukuze ugweme ukungenwa ubuthi bezinhlanzi nge-chlorine, i-chloramine, noma i-ammonia.
Uma unezinhlanzi ezigxumayo, kunconywa ukuthi umboze ithangi lakho, hhayi nje ebusuku kodwa nasemini. Ngaphandle kwalokho, isivalo sethangi lakho lezinhlanzi sibalulekile kuphela ebusuku ngaphakathi kwegumbi le-aquarium lapho izinga lokushisa le-ambient lingakhuphuka ngokwanele ukuze lihwamuke kakhulu amanzi.
Ngaphandle kwezinhlobo ezithile zamanzi abandayo, izinhlanzi eziningi zase-aquarium zidinga amanzi afudumele. I-Bettas, i-discus nezinye izinhlobo zezilwane zenza kahle kakhulu emanzini aphakathi kuka-76° no-85° F, ezinye izinhlanzi eziningi zasezindaweni ezishisayo zithanda uhla lwama-75° no-80° F, kanti i-goldfish yenza kangcono kakhulu ukusuka ku-68° kuya ku-74° F.
Ngemva kokuba usuqedile ukuhlanza ithangi lakho, ungaphinda ugcwalise ithangi ngamanzi amasha. Qinisekisa ukuthi amanzi amasha owafakile ethangini aseyikhiphile vele i-chlorine kusetshenziswa umuthi wokupholisa. Lesi yisikhathi kuphela okufanele ungeze amanzi ethangini lezinhlanzi.
Ngokuvamile kufanele ugcwalise ithangi libe iyintshi eyodwa ngaphansi kokusikwa ngoba ikholomu yamanzi kanye nesistimu yokungenisa umoya kuzodala amabhamuza achaphaza phezulu. Uma umugqa wamanzi uphakeme kakhulu, amanzi angase asakaze ngaphandle kwethangi.
Kufanele wenze ukushintsha kwamanzi okungama-25% njalo emavikini amabili kuya kwamane. Asikho isizathu sokususa izinhlanzi ngesikhathi sokushintsha kwamanzi. Qinisekisa ukuthi ugoqa igravel noma usebenzisa isicoci segravel ngesikhathi sokushintsha kwamanzi. Lapho ubuyisela amanzi ku-aquarium, sebenzisa i-Tetra AquaSafe® ukuze ususe i-chlorine ne-chloramine.
10 Amacebiso Abalulekile Okugcina I-Aquarium Inempilo Yondla kahle amanzi akho. Faka izinhlanzi zakho emanzini. Bantanta izinhlanzi esikhwameni. Gcina ibhalansi ye-pH namanye amazinga amakhemikhali. Qiniseka ukuthi izinga lokushisa lamanzi lilungile. Shintsha amanzi njalo. Hlanza ingilazi yethangi nezinye izakhiwo. Khetha usayizi olungile wethangi lakho.
Yenza ushintsho lwamanzi angama-25% ngemuva kwezinsuku eziyi-15. Khumbula ukwelapha amanzi kampompi nge-Aqueon Water Conditioner ngaphambi kokuwangeza ku-aquarium yakho. Kunamafilosofi ahlukene okuthi mangakanani futhi kangaki ukushintsha amanzi, kodwa u-10% kuya ku-25% njalo evikini eli-1 kuya kwangu-2 kuwumthetho omuhle wesithupha.
Ukuphetha, yebo ungenza izinguquko eziningi kakhulu zamanzi. Uma wenza okungaphezu kokushintsha kwamanzi oku-1 ngosuku, izinhlanzi zakho zizobhekana nengcindezi engenasidingo. Lokhu kungenxa yokuthi amapharamitha amanzi ayashintshashintsha. Ungalokothi uguqule amanzi angaphezu kuka-50% ngesikhathi esisodwa, njengoba lokhu kungabulala amagciwane awusizo ku-aquarium.
Ngokuvamile, okulandelayo ezinye zezindlela ongasho ngazo ukuthi izinhlanzi zakho zijabule. Babhukuda baye emuva naphambili ngokukhululeka nangomdlandla bezungeza ithangi. Njengabantu, izinhlanzi ezijabule zingase zibe nokukhanya okugqamile esikhumbeni sazo. Azibonakali zesaba ezinye izinhlanzi ethangini. Baphefumula ngokujwayelekile.
Uma inzika inyakazisiwe, amanzi angahlanzwa ngamakhemikhali nge-chlorine kanye/noma abiliswe ngaphambi kokuba asetshenziswe. Ukuhlelwa okuhle kakhulu ukuthi kube namathangi amabili futhi uwahlanze ngokushintshana. Ezinye izinhlobo zokwelashwa kwamanzi nazo zingasetshenziswa, njengokukhipha amagciwane ngokukhanya kwe-ultraviolet (UV) noma ukuhlunga.
Shintsha u-10% wamanzi akho e-aquarium isonto ngalinye noma u-25% njalo ngemva kwamasonto amabili. Amanzi ashintshwayo kufanele abe nezinga lokushisa elifanayo namanzi ase-aquarium. Ngaso sonke isikhathi phatha amanzi kampompi nge-conditioner yamanzi ukuze unciphise i-chlorine ne-ammonia ngaphambi kokuwangeza ku-aquarium. Shintsha ama-cartridge okuhlunga okungenani kanye ngenyanga.
Amanzi kampompi avamile alungile ukugcwalisa i-aquarium inqobo nje uma uyivumela ukuthi ihlale izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokwengeza inhlanzi (i-chlorine emanzini ompompi izobulala izinhlanzi). Kungumqondo omuhle ukuvumela isisefo sisebenze isonto lonke ngaphambi kokwengeza izinhlanzi ethangini.
Ngokwengxenye enkulu, ukuphakela izinhlanzi zakho kanye noma kabili ngosuku kwanele. Abanye abathanda ukuzilibazisa baze bazila ukudla izinhlanzi zabo usuku olulodwa noma ezimbili ngesonto ukuze bavumele ukuthi basuse izinhlelo zabo zokugaya ukudla. Izinhlanzi ezinkulu, ezihlala isikhathi eside zingahamba isikhathi eside phakathi kokudla kunezinhlanzi ezincane, ezikhuthele kakhulu.
Ngokuvamile ufuna ukulinda okungenani amasonto amabili phakathi kokwethula izengezo ezintsha ethangini lakho lezinhlanzi. Lokhu kunikeza isikhathi sokuthi isihlungi sebhayoloji sibambeke futhi. Lesi sikhathi siphinde sivumele inhlanzi entsha ukuthi ijwayele ithangi lezinhlanzi, kanye nezinhlanzi ezindala, eziqine kakhudlwana ukujwayela izengezo ezintsha ethangini lakho lezinhlanzi.
Umbuzo: Ungakumisa Kanjani Ukuhwamuka Kwamanzi Ethangi Lezinhlanzi
Ingabe I-Fish Tank Water Conditioner Yenza I-Tank Water Murky
Umbuzo: Lingakanani Ithangi Lamanzi Elishintshayo
Angakanani Amanzi Ashintsha Ithangi Lezinhlanzi
Indlela Yokwelapha Amanzi Ethangi Lezinhlanzi
Ungawathulula Kanjani Amanzi Ethangi Lezinhlanzi
Umbuzo: Ungawahlunga Kanjani Amanzi Ethangi Lezinhlanzi
Impendulo Esheshayo: Izinhlanzi Zingaba Nethangi Lamanzi
Umbuzo: Ungalisebenzisa Yini Ithangi Lamanzi Lezinhlanzi Ezithambisa Amanzi
Ingakanani I-Water Conditioner Yethangi Lezinhlanzi
Umbuzo: Ingakanani I-Amoxicillin Fish Tank Aquarium Water
Mangakanani Amanzi Ethangi Lezinhlanzi